ओलीका आइटीविज्ञ अलिको ई–सेवाबाट हवाइ टिकट लिए कारवाही हुने
काठमाण्डु , ९ असोज — प्रदेश नम्बर ५ सरकारले ई–सेवाबाट हवाइ टिकट नलिन सूचना जारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटीविज्ञ असगर अलिलाई झट्का लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका आइटीविज्ञ अलिको स्वामित्व रहेको ई–सेवाबाट हवाइ टिकट नकाट्न प्रदेश ५ सरकारले सूचना जारी गरेको हो । अन्यथा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना निकालेर अनुमति नलिई ई–सेवाबाट हवाई टिकट काटी व्यवसाय गर्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘पर्यटन ऐन २०७६ दफा ११ को उपदफा १ बमोजिम ट्राभल तथा ट्रेकिङ…
फेसबुकले किन देखाउन बन्द गर्दैछ लाइक र रिएक्सनको संख्या ?
September 27, 2019 Purakhabar News
एजेन्सी । फेसबुकले कुनै पनि पोष्टको लाइक एवं रिक्सेनको गणना नदेखाउने तयारी थालेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएअनुसार फेसबुले अष्ट्रेलियाबाट यसको सूरुवात गर्ने तयारी गरेको हो । मानिसहरुले कुनै पनि पोष्टमा भएका लाइक एवं रिक्सेनको गणनाअनुसार त्यो पोष्टलाई मान्यता दिने गररेको देखिएका कारण फेसबुकले यस्तो तयारी थालेको समेत जानाइएको छ । अष्ट्रेलियाई प्रसारण निगम एबीसी ले जनाए अनुसार फेसबुकले धेरै मानसिक संघ संस्था एवं फेसबुकले एनालाइस गरेको डाटा अनुसार मानिसहरुले फेसबुकका पोष्टको क्वालिटी भन्दा पनि लाइक एवं रिएक्सनलाई बढी मान्यता दिने गरेको पाइएपछि यस्तो गर्न थालिएको हो ।…
अब नेपालका सिमकार्डमा पनि ‘केवाईसी’ लागू हुने
September 26, 2019 Purakhabar News
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको सिमकार्ड लिने ग्राहकलाई थप व्यवस्थित गर्न बैँकमा जस्तै ग्राहक पहिचान गर्न ‘नाे योर कस्टोमर’ (केवाईसी) सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। सिमकार्ड लिने ग्राहकको पूर्ण विवरण लिई विवरणलाई व्यवस्थित बनाउने तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न केवाईसी अवधारणा ल्याएको हो। आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि बैँकहरुले मात्रै अनिवार्य गर्दै आएको केवाईसी पहिलो पटक सिमकार्डमा पनि अनिवार्य गर्न लागिएको हो। जथाभावी रुपमा सिमकार्डहरुको खरीद, बिक्री तथा वितरण गर्ने कार्यले गर्दा फोनमार्फत हुने आपराधिक गतिविधि बढेको हुँदा…
थामिएको जीवनको रफ्तार बदल्न परिवर्तन जरुरी छ : TVS Mega Xchange
बुटवलको भाट-भटिनी नजिक TVS Mega Xchange हुदै कुनै पनि पुरानो बाइक वा स्कुटर लिएर आउनुहोस उचित मुल्यांकन सहित नया टी भी यस चढेर जानुहोस भन्दै असोज ९ देखि बुटवल मा exchange मेला सुरु भएको छ। बुटवलको भाट-भटिनी नजिकको सिम्रन होटलमा भोलि बिशेष रुपमा यो कार्यक्रम गर्न लागिएको सुन्दर अर्याल ले जानकारी दिनु भयो। नचल्ने पुरानो बाइक वा स्कुटरको पनि न्युनतम मुल्य ३०००० राखिएको जानकारी दिनु भयो। चाडबाडको समयलाइ मध्य नजर गर्दै धेरै राम्रो अफर लिएर आएको बालाजी अटो मोबाइल्स बताउछ। अफरको जानकारी यो तस्बीर मा हेर्नु सक्नु हुनेछ।
September 24, 2019 Purakhabar News
बुटवल-बुटवलको लागि सुजुकी टु व्हिलर्सको आधिकारीक बिक्रेता आर एस अटोमोबाईल्स ले सुजुकी जिक्सर २५० को बुटवलमा औपचारिक रुपमा बिक्री शुभारम्भ गरेको छ । हाल सम्म नेपालमा उपलब्ध मोटरसाईकल मध्य सबैभन्दा आर्कषक तथा सुविधाजनक यो मोटरसाईकल यस प्रकारको पहिलो त्यस्तो किसिमको मो सा हो जसमा ट्युबलेस टायर दिईएको छ । सुजुकी जिक्सर २५० मा ९,००० आर.पि.एम., २६.५ पि एस को शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता बोकेको २४९. सि.सि.को शक्तिशालि ईन्जिन जडित छ । यो मोटरसाईकलको दुबै टायर मा ब्द्यक् डिस्क ब्रेक छ भने, १२ लि. क्षमताको पेट्रोल अट्दछ । डिजिटल ड्यास बोर्ड…
मेन्लो पार्क / सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले दशौँ हजार एप्सलाई निलम्बन गरिदिएको छ । सन् २०१८ मार्चको केम्ब्रिजको विश्लेषणात्मक तथ्याङ्कका कारण फेसबुकले अध्ययनका लागि ती एप्सलाई निलम्बन गरेको कम्पनीले शुक्रबार जनाएको छ । निलम्बनमा परेका एप्समध्ये झण्डै चार सय ओटा निर्माता छन् । आफ्ना प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित विवरणहरु चोरी हुनेगरी भएको क्याम्ब्रीज काण्डपछि फेसबुकले एप्सहरु निलम्बन गरेको हो । फेसबुकले सबै एप भने जोखिमपूर्ण नभएको स्पष्ट पारेको छ । सन् २०१८ मा केम्ब्रिज एनालिटिका नामक कम्पनीले बिनाअनुमति धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताको विवरण चोरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । फेसबुकले निलम्बनमा परेका एप तथा शङ्कास्पद…
आफ्नै ‘सर्वोच्च अदालत’ बनाउँदै फेसबुक
September 20, 2019 Purakhabar News
पछिल्ला केही वर्षयता सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुक चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ । गोपनीयतासम्बन्धी सवाल, सुरक्षासम्बन्धी सवाल तथा सरकारहरूसँगको विवाद जस्ता विषयहरुबाट फेसबुक घेरिँदै आएको छ । यावत् विवादहरुबाट पार पाउने प्रयासस्वरूप फेसबुकले एउटा गम्भीर कदम चाल्दैछ । अर्थात् फेसबुकले आफ्नै सर्वोच्च अदालतको स्थापना गर्दैछ । फेसबुकले स्थापना गर्ने उक्त निगरानी बोर्डको औचित्यका विषयमा सीईओ मार्क जुकरवर्गले एक ब्लग पोष्टमार्फत प्रष्ट पारेका छन् । जुकरबर्गले लेखेका छन्, ‘हामी हाम्रा नीतिहरुको हरेक दिन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जिम्मेवार छौं र फेसबुकका दसौं लाख सामग्रीहरुका बारेमा हामीले हरेक हप्ता निर्णय गरेका हुन्छौंं ।…
September 18, 2019 Purakhabar News
काठमाडौं / एनसेलका ग्राहकले अब कुनै पनि समय बिना कुनै झन्झट एनसेलको आकर्षक डेटा सेवाको मजा लिन सक्नेछन् । एनसेल प्रा. लि. ले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ जसअन्र्तत ग्राहकले अब अझ सुलभ दरमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस सेवाबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । यहि बुधबार ( असोज १) देखि लागु हुने यो योजना अन्तर्गत प्लान १९९, प्लान २९९, प्लान ४९९, प्लान ७९९ र प्लान ९९९ गरी पाँच वटा प्लानहरु रहेका छन् । यी प्लानहरु अन्तर्गत ग्राहकले प्लानको समयावधि रहुन्जेल अझ सुलभ दरमा डेटा सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्…
काठमाडौं– संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले एक सय रुपैयाँमा ३ जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो डाटा प्याकेज लिएर निरन्तर तीन दिनसम्म प्रतिदिन एक जिबीका दरले जम्मा ३ जिबी डाटा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराइएको हो। यो सुविधा असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म उपलब्ध छ। यस योजनामा सहभागी हुनका लागि *1415*3# डायल गर्नुपर्छ। यसका साथै 3D1G लेखेर १४१५ मा सन्देश पठाएर वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत पनि यो सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यस्ता छन् कम मूल्यमा पाइने तीन अटोमेटीक कार (मूल्यसहित)
September 13, 2019 Purakhabar News
काठमाडौं । उपत्यकाको ट्राफिक जामले मानिसहरुलाई निकै सताइरहेको छ । यस्तोमा नयाँ कार किन्ने मानिसले अटोमेटीक गियर भएको कारमा रुची राख्न सुरु गरेका छन् । यस्ता अटोमेटीक कारले जाममा गियर परिवर्तन गरिरहनु पर्ने हैरानीको अन्त्य गर्ने छन् । नेपाली बजारमा केही कम्पनीले आफ्नो इन्ट्री लेवल कारमा पनि अटोमेटीक अप्सन अपलब्ध गराउँदै आएका छन् । रेनो क्वीड, हुन्डाई सेन्ट्रो, फोर्ड फिगो र मारुती सुजुकी सेलेरियो एएमटी गियरबक्स सहित नेपाली बजारमा बिक्री हुने कम मूल्यका अटोमेटीक गिएर सिफ्ट प्रविधि भएका कारहरु पाउन सकिन्छ । रेनो क्वीड रेनो क्वीडमा १००० सीसी क्षमताको पेट्रोल…